မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဝါဆောမြို့ အာဆီယံကော်မတီဝါဆောမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အာဆီယံနေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဝါဆောမြို့ အာဆီယံကော်မတီဝါဆောမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အာဆီယံနေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
(၉-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
(၅၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဝါဆောမြို့ အာဆီယံကော်မတီဝါဆော၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး၏ နေအိမ်၌ ၈-၈-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပိုလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ အာဆီယံဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများ၊ ပိုလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဌာန အကြီးအကဲ Mr. Pawel Milewski ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း (၆၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို အာဆီယံအလံအား အာဆီယံ Anthem ဖြင့် အလေးပြု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ACW ကိုယ်စား အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Siti Nugraha Mauludiah က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကာ လက်ရှိ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Sansanee Sahussarungsi က မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သည့် အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများတွင် ရရှိခဲ့သည့် အောင်မြင်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်များအား အာဆီယံသံရုံးများမှ စားသောက်ဖွယ်ရာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။